သူမရေးလိုက်တဲ့စာလေး လေးတစ်ခုကြောင့် အချစ်ဟောင်းနဲ့ ပြန်လည်အဆင်ပြေတော့မှာလားလို့ ပရိတ်သတ်တွေ ထင်ယောင်ထင်မှား လုပ်လိုက်တဲ့ နန်းစုရတီစိုး – Cele Snap
နန်းဆုရတီစိုး ကတော့ သီချင်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး သီဆိုလေ့ရှိတတ်သူလေး ဖြစ်တဲအပြင် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လေ့ ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်နဲ့ ရင်းနှီးလွန်းသူလေး ဖြစ်ပါတယ်…နန်းဆုကတော့ အရင်က အဆိုတော်ချစ်သူနဲ့ အချစ်သီချင်းတွေကို တွဲဖက်ညီစွာ သီဆိုခဲ့တာကြောင့် ခုချိန်ထိလည်း ချစ်သူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေဆဲ သီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့ကြပြီး SHOW ပွဲတွေမှာလည်း လူငယ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်….
မကြာသေးခင်ကာလမှာတော့ နန်းဆု ကချစ်သူနဲ့ အခန့်မသင့်လို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ နန်းဆုက “အေးစက်တဲ့လေပြေတွေတိုက်ခတ်ပြီးရင် နွေဦးရောက်လာမှာပါ…လှပတဲ့ပန်းလေးတွေ ထပ်ပွင့်လာမှာပါ… ငါ့နှလုံးသားဟာ တစ်ဖန်ပြန်နွေးထွေးပြီးပန်းတွေ ဖူးပွင့်လာမှာပါ”ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကိုလည်း ရေးသားထားပြီး ဆယ်ကျော်သက်လေး တစ်ယောက်လို နုပျိုလန်းဆန်းနေတဲ့အလှတရားတွေနဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေကို တင်ပြီး အသိပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်…
နနျးဆုရတီစိုး ကတော့ သီခငျြးတှကေိုလညျး ကိုယျတိုငျရေးပွီး သီဆိုလရှေိ့တတျသူလေး ဖွဈတဲအပွငျ မွနျမာဇာတျလမျးတှမှောလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျလေ့ ရှိတာကွောငျ့ ပရိသတျနဲ့ ရငျးနှီးလှနျးသူလေး ဖွဈပါတယျ…နနျးဆုကတော့ အရငျက အဆိုတျောခဈြသူနဲ့ အခဈြသီခငျြးတှကေို တှဲဖကျညီစှာ သီဆိုခဲ့တာကွောငျ့ ခုခြိနျထိလညျး ခဈြသူတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနဆေဲ သီခငျြးတှကေို သီဆိုခဲ့ကွပွီး SHOW ပှဲတှမှောလညျး လူငယျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ပိုငျဆိုငျထားသူတှေ ဖွဈပါတယျ….
မကွာသေးခငျကာလမှာတော့ နနျးဆု ကခဈြသူနဲ့ အခနျ့မသငျ့လို့ လမျးခှဲခဲ့ကွပမေဲ့ ဒီနမှေ့ာတော့ နနျးဆုက “အေးစကျတဲ့လပွေတှေတေိုကျခတျပွီးရငျ နှဦေးရောကျလာမှာပါ…လှပတဲ့ပနျးလေးတှေ ထပျပှငျ့လာမှာပါ… ငါ့နှလုံးသားဟာ တဈဖနျပွနျနှေးထှေးပွီးပနျးတှေ ဖူးပှငျ့လာမှာပါ”ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကိုလညျး ရေးသားထားပွီး ဆယျကြျောသကျလေး တဈယောကျလို နုပြိုလနျးဆနျးနတေဲ့အလှတရားတှနေဲ့ အမိုကျစားဓာတျပုံတှကေို တငျပွီး အသိပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ…